Dike Àláá Mmụọ
Gém gém gém gém!
Dùm dùm dùm dùm
Tìkó tìkó tìkó tìkó
Gbám gbám dùm dùm.
Ọkụ Ọgbụgba: Gọọmenti Anambra Akasiela Ụlọakwụkwọ Patterson Grammar School Obì
Ọba Akwụkwọ Anambra Na Momodu Achịkọbarala Ụmụakwụkwọ Asọmpi Sụpèéré M
Anya Ndị NECO Ka Dị na Mmiri Maka Asambodo Adigboroja Ndị Ọrụ Ha
Obianọ Ekwela Nkwà Ịkwàlitekwu Usoro Mmụta Ọgbara Ọhụụ
Igbo College Na FRCN Achịkọbala Asọmpi Asụsụ Igbo n'Enugu
Ụlọ Omeiwu Agwala Gọọmenti Etiti ka O Bulite Ọnọdụ Ọdụ Ugboelu Ibadan
N'ihi ajọ ọdachi ọkụ ọgbụgba ahụ dabìdòrò ụlọakwụkwọ 'Patterson Grammar School, Awada' ụbọchị ụka gara aga ma taa isi otu nwata akwụkwọ gbara ahọ iri na otu; gọọmenti Anambra akasiela ndị nlekọta nakwa ụmụakwụkwọ ụlọakwụkwọ ahụ obì.
Àgbà nke ikpeazụ nke asọmpi Sụpèéré M (Bụ Spelling Bee Competition) nke ahọ 2019 a chịkọbààrà ụmụakwụkwọ steeti Anambra na ndị na-agụ akwụkwọ n'ọba akwụkwọ steeti ahụ abịala n'isi njedobe n'Awka, ebe ndị tuuru ugo bùrù ọtụtụ ihe nrita dị iche iche wee laa.
Ụlọọrụ na-ahụ maka ule, NECO, site na otu kọmitii nhazi dị n'aka, ka tinyere anya ha na mmiri ugbua inyochapụta ndị ọrụ ji asambodo adigboroja arụ n'ụlọ ahụ. Onye isi NECO na-ahụ maka Mgbasa Ozi na Mmekọrịta Ọhaneze, Azeez Sani, kwupụtara nkea na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ ụbọchị Sọndee, maka nchịkọta nnyocha ha mere nke ga-apụta ìhè nso nso a.
Aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ ekwela nkwà ịkwàlitekwu usoro mmụta ọgbara ọhụụ n'ime steeti ahụ.
Aka na-achị achị bụ Obianọ kwuputara nke a n'okwu ya na mmemme icheta ọgbụgba ahọ iri isii nke ụlọakwụkwọ 'Bubendorff Memorial Grammar School Adazi-Nnukwu', bụkwa nke weere ọnọdụ n'ogige ụlọ mmụta ahụ, dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha.
Igbo sị na ọ bụ ka onye si eme ka ekwe si akpọ ya, ma sịkwa na ọ na-abụ abụ isi kara aka búó ógìdì, ọ dị ka ọ natàra iké be ndị mmụọ. N'ịgbaso nke a, ọ kpọtụrụ akpọtụ ma zụọ azụọ na nso-nso a dịka òtù nnọrọ onwe ihe gbasaara ịkwalite asụsụ Igbo na-echu ụra, bụ òtù a maara dịka Igbo Kọleeji (bụ Igbo College n'asụsụ bekee), chịkọbara ótù nnukwu ọgbakọ asọmpi asụsụ Igbo maka ụlọakwụkwọ sekọndịrị dị iche iche dị na steeti Enugu.
Chimamanda Ngozi Adiche eturugo ugo edemede na Amerika
Chidi Igwe, Regina
Nwa-afọ ala Igbo a ma ama maka ide akwụkwọ eturula ugo National Critics Book na mba Amerịka. Adiche nwetere nturu-ugo a maka akwụkwọ ahụ o dere nke a kpọrọ Americanah. Adiche kọrọ akụkọ nwata nwanyị onye Nigeria, hapụrụ ala nna ya gawa mba Amerịka maka ịgụ akwụkwọ.
Chukwuemeka Stephen Uche
Ụmụnna m ndị Igbo, ndị CISA na ndị Wachet, gịnị ka anyị na-anụ? Onye nwụrụ? Ihe ukwu emeela n’ụbọchị ahịa ukwu! Oke osisi ndị Igbo ji eme ọnụ a daala! Mbazụ igwe ndị Igbo ji akpaa nganga agbajiela! Ọnwụ egburule Akanaede akwụkwọ, Professor Albert Chinụalamọgụ Achebe, Dimkpa Agụ ndị Igbo, Nwa diala ndị Ogidi, Anambra State! Onye Oji deekara onye Bekee n'oyibo! Onye Oji kuziri onye Ọcha otu eji asụ ma na-ede okwu Bekee! Oke Agụ ụmụ Igbo ji eme ọnụ! Chai, ike agwụla!
Oke ọñụ dara na nso-nso a n'Ogidi dị n'okpuru ọchịchị Idemili North nke steeti Anambra, dịka gọọmenti steeti ahụ gbàpèrè agadaga ụlọ ahịa ọhụrụ bụ ebe a na-ere akụrụngwa e ji ewu ụlọ. Ya bụ ahịa, bụ nke a kpọrọ "Building Materials International Market, Ogidi" bụ nke nwere ọnụ ụlọ ahịa karịrị otu puku n'ọnụ ọgụgụ, ma bụrụkwa nke a rụrụ site na njikọ aka ndị na-azụ ahịa ebe ahụ, iji mee ka ọnọdụ kawanyere ha mma, ha na ndị na-abịa azụ ha ahịa.
ỌCHA Brigade Eburu Ozi Nkwalite Adịmọcha Gaa Ahịa Ọnịtsha
Ndị ụlọ ọrụ 'Operation Clean and Healthy Anambra' bụ ndị a mààrà dịka ỌCHA Brigade eburula ozi nkuzi bànyere adịmọcha gburugburu wee bàá n'ime ahịa dị iche iche dị n'Ọnịtsha, iji wee kwàlite ezi ọnọdụ gburugburu bụ ịgbà ma bèlatakwa nsogbu a gbakata a kwụrụ a na-enwegasị n'okporo ụzọ dị iche iche na mpaghara ebe ahụ.
Ọkụ Agbagwòóla Otu Ụlọ Na Ọtụtụ Ngwongwo n'Ọnịtshà
Ọ bụ nnọọ ụbọchị akwa na àrịrị n'Ọnịtsha na steeti Anambra dịka ọkụ dị egwu gbagwòrò ma gbapịa ụlọ na ngwongwo gburu nde kwùrú nde Naịra.
Gọmmenti Anambra Amàchie Ibugharị Ahịa Na Ịzụ Ahịa n'Okporo Ụzọ
Gọọmenti steeti Anambra amachiela kpam kpam ihe ọ bụla bụ ibugharị ahịa mbugharị na ịzụ ahịa n'okporo ụzọ ọbụla na steeti ahụ.
Ọkụ Ọgbụgba Egbuola Ụmụaka Atọ n'Obosi, Gbarìkọọ Ebe A Na-Añụ Mmanya
Gọọmenti Etiti Ga-ewe Mmadụ Puku Isi Asaa na Ise N'Ọrụ Ugbo
Gọọmenti Etiti nọrọ ụbọchị Wednezdee kwupụta ebumnobi ya iwe mmadụ puku iri asaa na ise n'ọrụ ugbo iji were tute mmụọ ndị ọrụ ugbo n'ịkọpụta nri. N'otu aka ahụ, o kewapụtakwara Otu Nzukọ maka Azụ nke Naijiria, nke nwere ebumnuche ịkwalite ịzụ azụ n'ala anyị dịka Naijiria mechiri oké ala ya niile n'ebe ịtụbata azụ n'ala anyị.
E Guzobe Anyachebelu Dịka Onye Jigodi Ọkwa Ọkaikpe Ukwu Steeti Anambra
Aka na-achị steeti Anambra, bụ gọvanọ Willie Obianọ nọrọ ụbọchị Wenezdee wee guzobe Ọkaikpe Manasseh Anyachebelu dịka onye ga-ejidegodi ọkwa Ọkaikpe Nkwụmọtọ steeti ahụ ugbua. Mmemme nguzobe ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Awka, ma bụrụkwa nke dọtara ndị isi ọchịchị steeti ahụ na ndị ọzọ e ji okwu ha agba ìzù na ngalaba dị iche iche.
ASCSDA: Ndiowu Enwetala Ego Ịmalite Ọrụ Ụlọ Obibi Ndị Ji Otu Ahọ Efe Ala Nna Anyị
Ụmụafọ obodo Ndịowu dị n'okpuru ọchịchị Orumba North na steeti Anambra enwetala akwụkwọ ndọrọ ego ruru otu nde Naịra na ụma ise iji wee malite ọrụ ebe obibi maka ndị ji otu ahọ efe ala nna anyị n'ụlọ akwụkwọ 'Community Secondary School, Ndiowu' n'okpuru amụma ọrụ mmepe ime-ime obodo a kpọrọ 'Anambra State Community and Social Development Agency (ASCSDA)' bụ atụmatụ ọrụ ụlọ ọba ego mba ụwa na-akwàdo.
Dịka a sị na omepùrú onye ogbenye bụ chi ya ka ọ na-emere, a kpọkuola ma dụọ ndị aka ji akụ ka ha na-echeta ma na-enyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na gburugburu ha aka, iji kwàlite ezi ọnọdụ obibi ndụ ha.
ASCSDA Ekwe Nkwà Ikesàkwùrù Ọtụtụ Ime Obodo Ego Ọrụ n'Izuụka Ọzọ
Ụlọ ọrụ 'Anambra State Community and Social Development Agency', (ASCSDA) bụ ụlọ ọrụ mmepe ụlọ ọba ego mba ụwa na-enye nkwàdo na steeti Anambra ekwuola na ọ ga-amalitekwa ikesàkwùrù ụfọdụ ime obodo dị iche-iche na steeti ahụ ego iji kwàlite atụmatụ ọrụ mmepe malite n'ụbọchị Mọnde izuụka na-abịa abịa.
NOA, NGO Enyela Ndị Ekpenta Nri
Ibe Kelechukwu, Ogun
Ụlọ ọrụ National Orientation Agency na Qatar Charity enyela ndị ekpenta ihe oriri dị iche iche ruru nde naira iri n'ime obodo Alheri, n'ogige Kwali na Abuja nakwa ndị Dakwa dịka ndị ritere uru n'ihe onyinye iji nyere ndị o nweghị ka ọha ha n'ọnwa Ramadan.
Ụlọ Omeiwu Sinati nọrọ ụbọchị Tuzdee rịọ Ngalaba Gọọmenti Etiti Njem Ụgbọelu dị n'aka na ụlọọrụ ndị ọzọ nkea metụrụ ka ha kwalite ọdụ ụgbọelu Ibadan, Alakia n'ogo mba ụwa ga-enwe akarọngwa ọgba ọhụrụ.
FRSC Agbapeela Atụmatụ Ijè Awele Nke Ọnwa Mbà
Ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ màka njem siriri-wèrèrè n'okporo ụzọ n'ala Nigeria, bụ ụlọ ọrụ 'Federal Road Safety Corps, (FRSC)' ngalaba ya nke steeti Anambra agbapeela amụma njem awele nke ọnwa Mbà nke ahọ 2019.
Ụgbọelu Ikuku Udo (Air Peace) Enwetala Nturuugo Ọkaibe
Otu n'ime gbọelu ndị nje m n'ala anyị a na-akpọ Ikuku Udo (Air Peace) ka akpọrọ dịka ụlọọrụ bụ ọkaibe nke afọ 2019 na ụlọọrụ pụrụ iche nke ndị mmadụ. N'ozi ha wepụtara, ụgbọelu njem ahụ kwuru na onyeisi akụnụba na nhazi ọrụ ya, Oriaku Ejiroghene Eghegha, natara nturuugo ahụ n'aha ụlọọrụ Ikuku Udo (Air Peace).
Nnewi South Na FRSC Ejikọọ Aka Ibèlàtà Ihe Mbere Okporo Ụzọ
N'iji bèlata oke ihe mberede okporo ụzọ, gọọmenti okpuru ọchịchị Nnewi South, nke steeti Anambra azọpụla ụkwụ dike ijikọ aka ọnụ, ya na ndị òtù ọrụ ala anyị na-ahụ maka ije awele na nchekwa okporo ụzọ, bụ ụlọ ọrụ 'Federal Road Safety Corps'.
Wepụ Ego Mgbakwụnye Mmanụ Ụgbọala - IMF
Kelechukwu Ibe, Ogun
Akpọkuela Gọọmenti Etiti ka ha wepụ ego mgbakwụnye na mmanụ ụgbọala. Nke a ka onyeisioche International Monetary Fund, Christine Lagarde, kwuru na ọ bụ ihe ziri ezi ma kwesikwa ekwesị ime.
Ọdụ Ụgbọelu Sam Mbakwe na Owerri Agbaala Ọkụ
Chi ewerela ehihie jie na Mọndee n'ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe dị na Owerri, isi obodo Imo Steeti. Ọkụ ahụ bụ nke gbara na ebe ahụ ndị njem si abata n'ọdụ ụgbọelu ahụ.